Ndị na - enwetakwa ihe nrita nke ndị otu - China data nnweta ngalaba, actorylọ ọrụ
onye na-etinye uche ya
Ihe mkpuchi DJGZ23-SW10 bụ ngwaahịa smart kachasị ọhụrụ nke Senwei mepụtara. Ọ na-ejikọ teknụzụ nkwukọrịta ekwentị nke ugbu a, teknụzụ kọmputa, teknụzụ ike. Dabere na GPRS (CDMA ma ọ bụ netwọkụ ikuku na-arụ ọrụ) na ebe nleba anya isi na-ahụ maka ntanetị data, na-achọpụta nchịkọta data site na ngwa ngwa AD, na-achọpụta nhazi data, ndekọ data na nchekwa data site na sistemụ ọrụ etiti.
SW-TCP232-304 bụ sava ọdụ ụgbọ mmiri RS485, obere nha, njikwa ọnụ ahịa, ghọta RS485 na nnyefe nnyefe transfection transfection transpoction transpectional transitiction; ya na ọdụ ụgbọ mmiri 1 Ethernet, ọnụego 10 / 100Mbps; na-akwado ịmalitegharị oge ọrụ, DHCP na-enweta mkpebi ngalaba aha IP DNS na ntanetị, nkwalite ime obodo, ọrụ ọdụ ụgbọ mmiri mebere; na-akwado data njikwa omenala iji kpochapụ njikọ na-abaghị uru; ngwugwu ndebanye ahaziri iche iji chọpụta ọnọdụ njikọ.
SW-GPRS232-734 bụ ọdụ ụgbọ mmiri RS485 na-ekesa nkesa GPRS DTU, nke na-achọpụta ọrụ nnyefe ụzọ abụọ na RS485 ruo GPRS; na-akwado ohere netwọta GSM / GPRS; Nchedo mpụga RS485, ikike mgbochi mgbochi siri ike; na-akwado So-channel Socket 4-ntanetị; na-akwado TCP, UDP; na-akwado nnyefe transperent SMS, nnyefe netwọk transperent, HTTPD, UDC na ụdị ndị ọzọ; na-akwado ntụzizi ntọala izizi na setịpụrụ usoro izizi; na-akwado 5-36V voltaji n'obosara, DC na nhọrọ ntinye ike ọnụ.